Nkọwapụta Ahịa 2014 sitere na Salesforce Marketing Cloud | Martech Zone
Ikekwe otu n'ime isi ihe kachasị pụta na 2014 bụ na ụlọ ọrụ na-amalite ileba anya na nso nso ndị njem. Kedu ka esi achọpụta ngwaahịa gị n'ịntanetị? Kedu ka ị si eduga atụmanya site na nchọpụta site na ntụgharị? Ọbụna nke kachasị mkpa, gịnị ka ị na-eme iji hụ na ị jigidere ma soro ndị ahịa gị nwee mmekọrịta bara uru karị?
Ahịa Cloudforce Cloud Cloud chọpụtara na 86% nke ndị ahịa azụmaahịa kwenyere na ịnwe njem ndị ahịa na-emekọ ihe ọnụ dị mkpa mana naanị 29% nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-egosi onwe ha dị ka ihe dị irè na ịmepụta njem ahụ. Nke ahụ bụ nnukwu ọdịiche! Ekwenyere m na teknụzụ na akụrụngwa na-agbasa na mgbasa. Anyị ka na-esi nri ogbe ma gbaa ahịa iji gbasosie ike ndị otu anyị na-ere ahịa kama itinye n'ọrụ ihe karịa.
Kasị njọ, enwere ụkọ nchịkọta onyinye na ụlọ ọrụ na enweghị njikọ ahịa na akụkụ ndị ọzọ nke nzukọ na-akwado ahịa - dị ka ọrụ ndị ahịa ma ọ bụ mmepe ngwaahịa. Ọ bụrụ na m bụ onye na-eto eto na-ere ahịa taa, aga m etinye oge ka ukwuu n'oge m na-enyere aka imeri ụlọ ịzụ ahịa azụmaahịa na iji azịza iji kọọ akụkọ ziri ezi banyere atụmatụ ndị ahụ.
Ka njem ndị ahịa bịara dokwuo anya, inwe mmetụta na njem ahụ na ịtụ njem ahụ dị mgbagwoju anya karịa olulu ahịa dị mfe!
Ihe omuma ihe omuma a na-eweputa ihe omuma ndi ozo di na Salesforce Marketing Cloud's 2014 research. Salesforce ga-ebipụta akụkọ 2015 State nke Marketing na Jenụwarị.
Tags: AnalyticsKeduihe eji emekota iheọdịnaya managementNgwaọrụ crmnjem ndị ahịaNdị ọrụ nlekọta ndị ahịadataemail Marketingngwanrọ ịhazi atụmatụ ngwa ọrụERPerp softwarenhazi usoronchịkọta ahịaakụrụngwa ahịaemail mkpanakaamụma ọgụgụ isirevenue kwa Pịasalesforce ahịa ojiingwa ige ntingwa oru eji ebi akwukwo
Dee 29, 2014 na 11: 22 AM
Na-adọrọ mmasị na ọbụlagodi na ụlọ ọrụ kachasị ukwuu, naanị 29% nke ndị na-ere ahịa na-eche na ha na-ejikwa njem ndị ahịa na-achịkwa nke ọma. Da dị ka nke a bụ ebe ụlọ ọrụ kwesịrị ilekwasị anya na 2015…